I-China Linear atc cnc router fektri kanye nabakhiqizi | JCUT
1. Ukuqina kwesakhiwo: lonke uhlaka lwensimbi luhlanganiswe ndawonye, ​​oluphathwa yi-vibration (tempering) ukuguga, futhi akukho-deformation ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside.
2. I-Taiwan Syntec yohlelo lokulawula ukusebenza kwezimboni olusebenza kahle, enekhwalithi enhle eqinile, ukulungiswa okuhle, ingalawula ukuqedwa kokusebenza kwe-3D okungamasendla amaningi, okusheshayo, ukucubungula okubushelelezi kwe-3D, ukubaza nokusika.
3. I-Spindle motor ingeniswa i-Italy HSD ephezulu yamandla ithuluzi lokupholisa umoya, ukucaca okuphezulu, umsindo ophansi, ijubane eliphakeme, impilo ende, ukusebenza okubushelelezi ukunikeza ukudlala okugcwele ekusebenzeni okuphakeme komshini.
4. I-Italy ingenise i-saw saw yokuqala yemishini yokudonsa, kungaba ukuqeda isikhathi esisodwa ukubumba, ukusika, ukubaza, ukufaka i-hinge slot, i-keyhole nezinye izinqubo eziyinkimbinkimbi zokukhiqizwa kwamaphaneli omnyango.
5. I-Japan Yaskawa servo drive inamandla kuzo zonke izinhlobo zokusikwa kwezinkuni ezisindayo nokubaza.
6. Umhlahlandlela wolayini wamukela umhlahlandlela ongenisiwe wesigcawu sikalayini onemigqa ephindwe kabili nemigqa emine yama-slide ebhola, angathwala umthwalo osindayo, agijime kahle futhi alondoloze ukuzinza okuphezulu.
7. Uhlelo oluguqula amathuluzi lusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukile bezwe lonke, obungashintshanisa amathuluzi adingekayo ngobuhlakani. Umthamo wokugcina ithuluzi ungafinyelela izingcezu eziyi-12-16.
8. Ithebula elinetafula lokugcoba lamazwe aphambili aphambili, ukumelana kwetafula le-bakelite, akukho kudalulwa, i-adsorption ephezulu, i-adsorption eqinile yempahla ehlukene, leli tafula lomshini eline-suction plate okuzenzakalelayo yokuphakamisa imishini lisebenziseka kalula ukuthi lenze umgodi wokukhiya umnyango wokukhiya kanye nokufakwa kwephini lokuhanjiswa.
Ukuhambisana kwesoftware ye-9G: Iyahambisana ne-MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, JDpaint njalonjalo.
1. Imboni yefenisha:
Ifenisha yephaneli, ifenisha yangokwezifiso, amakhabethe, ikhabethe, ikhabethe, ifenisha yasendulo nazo zonke izinhlobo zephaneli yokufakwaza imbali yephaneli nenqubo yokuvula ukhiye wesikhathi esisodwa.
Zonke izinhlobo zama-murals zokuhlobisa, izikrini, amaphethini okuhlobisa, ibhodi lamaza ezinhlangothi ezintathu, ibhodi elithatha umsindo kanye nokunye ukucubungula kokuhlobisa.
3. Ukulungiswa komkhiqizo okuqediwe we-Semi wezinto zezinto zokusebenza zezimboni:
Ukusebenza okujulile kwemikhiqizo eseqedile efana ne-countertops yemishini yokuthunga yezimboni nendawo ephezulu yezinto ezisebenza ngogesi.
4. Umkhakha wezinsimbi zomculo:
Ukuqhutshwa kwekhanda le-Guitar, ukucutshungulwa kwesiginqi esenziwe ngaphezudlwana kanye namaphethini ahlukahlukene wokuhlobisa womculo we-Musical Izinsimbi zokubaza kanye nokukhiqizwa komhlaba okuveziwe kathathu
5. Umkhakha wezimboni:
Ukukhiqizwa kokukhethwa kokuthathwa kwezinkuni, Foam yobumba elahlekile, isikhunta sokudla (njenge: isikhunta sekhekhe lenyanga) nolunye uhlobo lokubumba.
6. Imboni yezandla:
Ukukhululeka kwezobuciko, ukuklama ifilimu, izikebhe zomsebenzi wezandla, imihlobiso yezimoto nobunye ubuciko kanye nobuciko bokukhiqiza.
7. Ukwenza amamodeli wezakhiwo
8. Imboni Yezokukhangisa:
Ukusikwa kwe-Acrylic nokubaza, ukwenza imodeli ye-acrylic blister, namabheji ahlukahlukene kanye nezimpawu zesithombe esakhiwe nokukhiqizwa.
Umshini wokusika we-High-End R8 CNC
Ithuluzi Ithuluzi Isikhundla se-8 servo inline auto thuluzi lokushintsha umugqa wamathuluzi inzwa yamathuluzi
Umshayeli Shanlong servo driver
Uhlelo lokulawula Shanlong 3042 bonke ohlelweni olulodwa lokulawula
IKhabinethi UProfessor iKhabhinethi enkulu
Ukunciphisa kabusha IJapan Shimpo kunciphise
Esedlule: I-Wood router ye-atc
Olandelayo: Umshini we-Atc funiture